भक्तपुर बाघकाे आक्रमणबाट शिरीषकाे मृत्यु – Medianp
भक्तपुर बाघकाे आक्रमणबाट शिरीषकाे मृत्यु
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४१२:२५0
भक्तपुर, १ फागुन । सूर्र्यवनायक नगरपालिका–७ गुण्डु पानी ट्यांकीमा बाघको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ पसल गएर फर्किने क्रममा गुण्डु खहरे बस्ने सुनिल तामाङका छ वर्षीय छोरा शिरीषलाई बाघले घिसारेर जंगलमा लगी खाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘प्याडम्यान’ पछि अक्षयकुमार ‘मिल्कम्यान’ बन्ने !
किन किमले गरे दक्षिण कोरियाको प्रशंसा?
योजना एनजिओलाई नपारेको भन्दै कार्यकक्षमै मन्त्रीले सचिवलाई हाने झापड, पत्रकारसगँ रोए सचिव,